Ururada Haweenka Gobolka Bari oo Dhaliilay Natiijada Imtaxankii Deeqda Waxbarasho – SBC
Ururada Haweenka Gobolka Bari oo Dhaliilay Natiijada Imtaxankii Deeqda Waxbarasho
Posted by Webmaster on Siteenbar 26, 2011 Comments
Ururada Haweenka gobolka Bari ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen magaalada Boosaaso xarunta gobolka bari waxay ku dhaliileen qaabkii loo maareeyay Deeqihii waxbarasho ee loo galay Imtaxamaadka ee ay dowlada Turkigu ugu talagashay Ardayda Soomaaliyeed .
Ururka Haweenka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso ayaa kulankaasi si wada jir ah ugu Cambaareeyay Wasaarada waxbarashada Puntland in aanay aheyn wax la qaadan karo sidii loo maareeyay Deeqahaasi Waxbarasho kuwaas oo ay ku tilmameen in gobolka Bari oo ay ku yaalaan goobo wax barasho oo aad u farabadan islamarkaana ardaydii intaxaamka ka qeyb galay 4 qof ay ka helaan Deeqahaasi.
Maryan Maxamed Xasan Guduudo gudoomisada Ururka Haweenka gobolka Bari ayaa sheegtay xili ay ka hadleysay kulankaasi in ay arkeen ardaydii gobolka Bari oo ku soo hungoobay Imtaxaamaadkii ay galeen, loona sheegay in ardaydaasi kumanaanka aheyd ee Garowe uga qeyn gashay imtaxaanka ay 4 ka mid ah oo keliya Heshay, taasina ay tahay mid aanu u qalmin gobolka.
Waxa ay sidoo kale ku tilmaantay in ay dheceen wax isdabamarin aad u weyn. aanana loo sixin si cadaalad ah sida ay hadalka u dhigtay, waxayna mahad balaaran docda kale u jeedisay Dowlada Turkiga iyadoo uga mahadcelisay gar gaarka iyo deeqda wax barashoo ee ay umada Soomaaliyeed la garab taagan yihiin.
Khadro Dhuungal waa xubnaha sar sare ee Ururka Haweenka Boosaaso waxaana ay sheegtay dhankeeda in aanay khancin natiijadii lagu dhawaaqay islamarkaana ay sugayeen gobolka bari oo ugu weyn gobolada Puntland ay ka soo baxaan arday bar oo bar ah sida ay hadalka u dhigay balse ay iminka noqon sidaas ayna qabsatay waxyaalo ay ku tilmaantay Musuq maasuq.
Waxayna Khadro hadalkeeda ku soo gaba gabeysay in ay aad uga xumaadeen waxa dhacay islamarkaana ay fadhiyaan wixii lagu qancin lahaa.
Ardayda gobolka Bari ayaa dib ugu soo laabtay Magaalada Boosaaso oo ay horay uga ambabexeen magaalada Garoowe si ay uga qeyb galaan imtaxaanka Deeqda waxbarasho ee ay dowlada Turkiga ugu baaqday Ardayda soomaaliyeed waxaana Imtaxaamkaasi natiijadiisa la soo badhigay Magaaladaas.
Siteenbar 27, 2011 at 12:19 pm
Kkkkkk.ma awalbaad sugayseen inay caddaalad kudhacdo waxaan kitaabka allaah ama culimadu qaybin muqdisho waxaa laqaaday hal qoys sida wargeysyadu qoreen idinkaaba ka roon.waxaa laga yaabaa inay khayr utahay haritaanku